Semalt: Ahoana ny fikajiana ireo tranokala ao amin'ny Google Chrome ao anatin'ny iray minitra
Ao anatin'ireo traikefa an-tserasera amin'izao fotoana izao, dia mety ho zava-dehibe ho an'ny mpampiasa ny fanakanana tranokala amin'ny tranga sasany. Ohatra, ny ray aman-dreny dia mety maniry ny hametra ny zanany tsy hiditra amin'ny tranonkalan'ny votoatin'ny olon-dehibe. Amin'ny tranga hafa, mety misy manakana ny tranonkala iray izay mitazona hatrany.
Ny mpitantana ny fahombiazan'ny mpanjifa Semalt , Michael Brown, dia manome fomba sasany izay ampiasain'ny olona hisorohana an'ireny tranonkala ireny.
Ity torolalana SEO ity dia ahitana fomba vitsivitsy manazava ny fomba hanakanana tranonkala sasany amin'ny PC. Hampiasa Google Chrome izahay ho toy ny tranonkala samples. Ireo fomba ireo dia mihatra amin'ny browsers isan-karazany sy ny fanitarana hafa. Mety handova kely ny fomba fiasa noho ny fanovan'ny mpanoratra ny code. Na izany aza, dia tsy tokony hanahy momba ny rafitra miasa ianao. Ireto fomba ireto dia:
1. Mampiasa Chrome extension
Azo atao ny mampiasa fitaovana sy fanampim-pampandrosoana hafa mba hamerana ny fampiasana sasantsasany amin'ny tranonkala sasany. Ny sasany amin'ireo fanampim-panazavana ireo dia manana endri-javatra maro toy ny fidirana amin'ny tenimiafina mba hanampiana fiarovana hafa. Ao amin'ity torolàlana SEO ity dia hampiasa ny fanitarana amin'ny anaran'ny BlockSite izahay. Azonao atao ny manamboatra tranokala fanampiny ao amin'ny Chrome Web App Store. Azonao atao ny mametraka ity addon ity ary tsindrio ny install (Hanampy Chrome).
Amin'ny alalan'ity adihevitra ity dia afaka manampy ny tranonkala amin'ny lisitra maintimainty rehefa mitsidika ny klioba eo amin'ny sehatrao. Azonao atao ny mamela sy manala ireo endri-javatra amin'ity adihevitra ity. Ankoatra izany, afaka mivezivezy foana amin'ny safidinao ianao ary mitantana ireo tranonkala blacklist..Rehefa manindry ny rohy mankany amin'ny sehatra anaty lisitra ianao ary mahazo hafatra "Voasakana" dia midika izany fa mahomby ny fanitarana. Ny fanitarana hafa dia mety tsy mampiasa an'io fomba fanao io fa miasa amin'ny hevitra mitovy amin'izany.
2. Vohikala tranokala eo amin'ny Windows PC
Ho an'ny olona mihazakazaka PC Windows, dia mety ilaina ny manakana ny tranonkala iray manontolo amin'ny alalan'ny mpampiantrano azy. Mba hahatratraranao an'io vokatra io dia tsindrio ny manomboka amin'ny PC-nao PC ary soraty ao amin'ny panohizan'ny fikarohana ny "C: \_ Windows \_ System32 \_ drivers \_ etc \_". Avy eto, mila ny safidinao havanana ianao ary hanova ny mpampiantrano amin'ny alàlan'ny fampiasana rindrambaiko fanoratana tsotra.
Azonao atao ny mampiasa ny code 127.0.0.1 plus ny anaran'ny tranonkala hanakana azy io. Ny tranokalanao dia afaka manakana azy tsy hiditra amin'ny solosaina manokana. Ampiasao ny doka vaovao amin'ny andalana hafa mba hanakanana tranonkala maro kokoa. Mba hisorohana ny sehatra iray manontolo, andramo ny tranonkala ankoatra ny "https: // na www" mba hanatanterahana ireo protocoles rehetra.
3. Mampiasa Software (Dr Party)
Ny fampiharana PC sasany dia afaka manampy amin'ny faneriterena ny fidirana amin'ny tranonkala sasany. Rehefa mametraka ity rindrambaiko ity ianao dia tsy mila mamantatra ny fomba hanakanana ireo tranonkala. Afaka manao ny zava-drehetra ho anao izy ireo. Mety misy ny rindrankajy na rindrambaiko antitra. Na izany aza, ny ankamaroan'ireto fampiharana ireto dia mety mitaky fandoavam-bola ho an'ny fampiasana azy rehefa tsy afaka izy ireo
4. Tranokala mihidy amin'ny router
Ho an'ireo mpampiasa misimisy, azo atao ny manakana ny tambajotra iray manontolo. Ity paikady ity dia teknika kely ary mety mitaky ny hanànana manam-pahaizana iray. Mila manakana tranonkala iray avy amin'ny adiresy IP ianao. Na izany aza, ilaina ny mamorona ny rafitra router. Azonao atao ny miverina amin'ireo fiovana ireo raha tsy misy zavatra tsy mandeha Source .